Wasaaradda Xanaanada xoolaha Puntland oo tababar usoo xirtay dhaqaatiir ka shaqeynaya daryeelka caafimaadka Xoolaha. – Radio Daljir
Febraayo 17, 2013 5:07 b 0
Tababarkan oo socdey 21 maalmood ?ayaa ka qeyb galayaasha tababarkaan loo carbiyay ?fahansiinta qaabka ?dawada loo siiyo loona duro ?xoolaha jiran.
Gudoomiyaha Jaamacadda PSU ahna gudoomiyaha ururka Maxliga ah ee Kaalo Maxamuud Sheikh Xaamud oo ururkiisa uu fuliyay tababarkaan ?isagoo taageero dhaqaale ka helay Hay?adda USAID ?ayaa ugu baaqey dadkii loo dhameeyay tababarka inay si daacad oo ?hufan ?aqoontooda ?ugeeyaan deeganadii ay ka yimaadeen, Waxaana uu sheegay qof walba oo tababarkan qaatay in liisanayo qalab iyo daawooyinka uu ku howl galo.
Bashiir Axmed Guuleed oo kamid ah dadkii loo qabtay tababarkaan ayaa goobta ka balanqaaday in aqoonta loo kordhiyay ay ula laaban doonaan deegaanadii iyo dadkii ay ka yimaadeen.
Agaaismaha guud ee wasaaradda xanaanda Puntland Ibraahim ?Xareed Cali ??Dacar? oo soo xiray tababarka ?ayaa sheegay in dhibaatada ugu weyn ee ka dhasha cudurada xoolaha ay sabab u tahay ?isku gudbida xoolaha gobolada Punland iyo meelaha ka baxsan, Wuxuu agaasimuhu uu ?sheegay in ?dadka la siiyay xirfada la filayo in ay isbadal ku sameeyeen daryeelka caafimaadka xoolaha.
Arintaan tababarka ah waxay kusoo beegmaysaa xilli deegaanada miyiga ee gobolada Puntland qaarkiis ?lagasoo sheegayo ?cuduro ku dhacay xoolaha nool oo saameyn ku yeeshay xoolihii badnaa ee miyiga ka imaan jiray loona soo iib geyn jiray magaalooyinka.